धेरै शताब्दीयौंदेखि, विभिन्न देशहरूमा र वर्गहरू को महिला सुन्दर र आकर्षक उपस्थिति लागि लडिरहेका छन्। संख्या, अनुहार विशेष ध्यान दिन, र पाठ्यक्रम, बाल। बाल को राज्य टाउको केटी आफु मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ। आखिर, बाल्यकाल देखि हरेक सौन्दर्य कपाल होसियार हेरविचार आवश्यक थाह छ। अन्यथा, छवि बिग्रेको हुन सक्छ।
को ताले मा हानिकारक प्रभाव पराबैंगनी, कस्मेटिक रंग र केही उपकरण, र बाल dryers र ploek को एक किसिम को प्रयोग छ। हानि पनि comb वा कठिन रबर। त्यसैले, महिला आफ्नो कपाल चम्कने दिन र तिनीहरूलाई बलियो बनाउन केही रहस्य जान्न आवश्यक छ।
घरमा बाल बलियो
स्वस्थ कपाल तिनीहरूलाई को दैनिक हेरविचार दिनेछु। यो जरा बलियो ठूलो ध्यान महत्त्वपूर्ण छ। बाल हेरचाह सजिलो छ। आवश्यक सौंदर्य सैलून पैसा धेरै खर्च छैन। घरमा सम्भव लोक उपचार बलियो कपाल कि? हो, प्रभावकारी विधि र व्यञ्जनहरु घर छोडेर बिना आफ्नै लागू गर्न एकदम सम्भव छ।
कुनै पनि मास्क वा अन्य कस्मेटिक तयारी प्रयोग गर्नु अघि, तपाईं माथि धन बनाउन घटक गर्न एलर्जी छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। सही आफ्नो बाल प्रकार निर्धारण। यसलाई पूरा गर्न आवश्यक छ कपाल को बलियो बनाउँछ घरमा लोक उपचार। यसलाई केही सरल नियमहरू पालन गर्न पर्याप्त छ:
न्यानो पानी संग आफ्नो कपाल राम्रो छ धुन। र कुनै पनि मामला मा, तातो डिटर्जेंट संग धुन छैन। को स्नान एक टोपी अन्तर्गत उनको कपाल लुकाउन बिल्कुल आवश्यक छ।
सुक्खा कपाल स्वाभाविक बरु एक हेअर भन्दा सिफारिस गरिएको छ। आफ्नो टाउको राम्रो अवशोषण तौलिया र्याप।
टाउको चाँडै सुक्खामा गर्दा, एक हेयर ड्रायर बख्शते मोड प्रयोग गर्नुहोस्। यस मामला मा हावा प्रवाह, न्यानो वा चिसो। त्यसैले कपाल भन्दा सुकेको र अन्त्य छैन - posechonnymi।
उच्च गुणस्तरीय combs र combs प्रयोग गर्नुहोस्।
टाउको मालिश (पनि छैन अक्सर) बनाउन।
कम्तिमा एक पटक कपाल तेल लागू गर्न हरेक2हप्ता। तर, अन्यथा बाल चिल्लो लागेको हुनेछ, यो प्रक्रिया संग दूर प्राप्त छैन।
बाल लोक उपचार को बलियो बनाउँछ
घरमा सम्भव लोक उपचार बलियो कपाल कि? हो, एक सय केही वर्षसम्म महिला आफ्नो कपाल बलियो बनाउन विभिन्न तरिकामा प्रयास गरेका छन्। सौन्दर्य व्यञ्जनहरु हाम्रो दिन आए। कस्मेटिक "ड्रग्स" जडीबुटी र अन्य बिरुवाबाट गरेका थिए। Broths र चाय यसको कार्य सामना र बाल स्वास्थ्य दिनुभयो।
घरमा बाल लोक उपचार को पदोन्नति गर्न, तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
खरबुजा रस, बन्दागोभी, ककडी, गाजर, घ्यु पात, प्याज;
nettle, hypericum, सन्टी र चिनार तन्तु देखि broths;
तपाईं पनि हर्बल मास्क बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, nettle र ऋषि आधारमा। , बराबर अनुपात घाँस डाटा लिन plantain र अजवायन को नै रकम थप गर्नुहोस्। मिश्रण 1 कप उम्लिरहेको पानी पोख्नुहोस्। 1 घण्टा Infuse गर्न decoction छोड्नुहोस्। फाटो र कालो रोटी टुक्रा थप्नुहोस्। एक पेस्ट प्राप्त गर्न मास्क मिश्रण। अझै पनि न्यानो, बाल यसलाई लागू हुन्छ। मुखौटा2घण्टा पछिल्लो हुनेछ, र त्यसपछि कुल्ला।
झर्ने बाहिर बाट बाल बलियो: लोक उपचार
अपरंपरागत व्यञ्जनहरु cosmetology पुस्तामा परीक्षण गरे। तथापि, सबै बस लागूपदार्थ निको गर्न सकिन्छ। केही अवस्थामा यो आफ्नो दैनिक आहार परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ।
जो आवश्यक झर्ने बाहिर देखि कपाल बलियो? लोक उपचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले, खान पर्छ चिकन, मासु, अन्डा, पनीर, चामल, दलिया र कोदो अक्सर केश बलियो बनाउन। यी खाद्य पदार्थ मा बाल हानि रोक्न कि आवश्यक एमिनो एसिड समावेश गर्दछ। यस रोग सामना लसुन, मशरूम, खमीर र खैरो रोटी मदत गर्नेछ। यी खाद्य पदार्थ सेलेनियम समावेश गर्दछ। यो बाल follicles बलियो र कपाल कम अक्सर बाहिर पर्छ।
एक बाल बलियो र जीवित लुगा धुने बियर टाउको को हानि रोक्न सरल र सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका। निस्सन्देह, हरेक दिन, तर कम से कम एक पटक एक महिना आफ्नो कपाल "बियर दिन" व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। केश follicles बलियो हुनेछ, र बाल मात्रा प्राप्त हुनेछ।
अर्को सहायक - मह छ। यसलाई न्यानो पानी मा पतला छ। पनि बिरुवा प्रयोग कपाल हानि को उपचार को लागि। यो वोदका को 100 एमएल हालिएको छ। को घटक राम्रो मिश्रित हुनुपर्छ। मुखौटा गर्न जीव को प्रतिक्रिया हेर्न छाला को एक सानो क्षेत्र मा हालतमा लागू अघि प्रयास गर्नुहोस्। को एलर्जी वर्तमान छैन भने, त्यसपछि आफ्नो खोपडी मा मिश्रण RUB।
बाल मास्क लागि व्यञ्जनहरु आमा आधारित
धेरै प्रभावकारी यसलाई आमा घर मा बाल लोक उपचार बलियो छ। एक जम राल छ पहाड Balsam, कस्मेटिक्स मा दशकहरु लागि प्रयोग गरिन्छ। Shilajit एमिनो एसिड, भिटामिन र विभिन्न पोषक मा धनी छ। यो संघटक सक्रिय मास्क बनाउन को लागि घर मा महिला प्रयोग गरिन्छ।
Shilajit प्रयोग गरिन्छ:
बाल विकास सुधार;
मोटाइ र चम्कने दिन;
बाल हानि रोक्न;
एकदम केश को बोसो सामग्री कम;
क्षतिग्रस्त समाप्त पुनर्स्थापना;
प्राप्त dandruff छुटकारा।
नियम को रूप मा, आमा को रोगहरु को एक नम्बर संग संघर्ष गर्दै छन् मास्क, को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ व्यञ्जनहरु को एक ठूलो संख्या हो। हामी सबै भन्दा लोकप्रिय सूची।
, केश बलियो बनाउन 10 ट्याब्लेटको आमा लिन र पाउडर तिनीहरूलाई पीसने। न्यानो पानी पोख्नुहोस्। यो एउटा ठूलो resembling क्रीम प्राप्त गर्नुपर्छ। मह3चमचा थप्नुहोस्। हलचल।
वृद्धि सुधार र बाल 10 mumie ट्याब्लेटको एक टाउको लिन र पाउडर तिनीहरूलाई पीसने गर्न। को कागति को रस थप्नुहोस्।
Baldness आमा बाम मदत गर्नेछ। लिन उपकरण को3चमचा र न्यानो पानी नै रकम थप गर्नुहोस्। परिणामस्वरूप मिश्रण चम्मच jojoba तेल खन्याउन।
यस दबाइ, आमा, सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ। पहाड बाम एन्टिबायोटिक लिने वा क्यान्सर बाट पीडित छन् गर्नेहरूलाई मा contraindicated छ। यो घटक मा मुछिन छैन। यो एक महिना भन्दा बढी प्रयोग गर्नुहोस्।
तोरी आधारित व्यञ्जनहरु घर मास्क
तोरी संग घर मा बाल लोक उपचार बलियो धेरै प्रभावकारी हुन्छ। यो कपाल बलियो बनाउन मद्दत गर्छ र आफ्नो विकास बढवा दिन्छ। यसको बलिरहेको गुण सबै कुरा। तोरी रक्त सुधार र बाल follicles निश्चित छन्। खाना लागि प्रयोग तोरी पाउडर। पानी र चलाउनु मा भंग। आफ्नो बाल मा मास्क लागू र आधा एक घण्टा पछि बन्द धुन।
शैम्पू धेरै बस तोरी कुक आधारमा। kefir एक गिलास, र एक अण्डाको पहेंलो भाग संग पाउडर मिश्रण को चमचा। केवल जरा मा उत्पादन लागू र ध्यानपूर्वक मालिश। त्यसपछि स्याम्पु धुने टाउको छैन, धुन।
एक धनुष संग बाल बलियो
को misconception धनुले मात्र खाना पकाउन र चिकित्सा मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। cosmetology मा, यो तरकारी लामो समय को लागि आफ्नो लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। प्रभावकारी घर धनुष मा बाल लोक उपचार बलियो। विगतमा, महिला उहाँको मदत संग fairer सेक्स केश पोषण र moisturize र बाल हानि रोक्न छन्।
तीव्र वृद्धि लागि प्याज, मह, र दही ब्रांडीको आधारमा मास्क बनाउन। प्याज रस दुई चमचा मह एक चमचा संग मिश्रित। यो मिश्रण मा, लवण, रक्सी, kefir र burdock तेल नै रकम थप गर्नुहोस्। मुखौटा लागू गरेपछि तौलिया अन्तर्गत उनको कपाल लुकाउनुहोस्। त्यसैले तपाईं एक ठूलो प्रभाव प्राप्त।
केश बलियो बनाउन, प्याज रस, मेयोनेज, मह, तेल को बराबर अनुपात मा मिश्रण। सबै बाल प्रकार को लागि उपयुक्त एक धनुष को आधार मा मास्क। लगभग 30 सत्र - तर यो तिनीहरूलाई धेरै छ गर्छ।
तर, कस्मेटिक सामाग्री किनभने गंध को धेरै महिलाहरु repels। बाट प्याज "स्वाद" स्याउ साइडर सिरका हटाउन मदत गर्नेछ। निलम्बन को नै राशि संग पानी को आधा लीटर मिश्रण। प्राप्त एक मिश्रण संग आफ्नो बाल कुल्ला।
दही को मद्दतले कपाल बलियो
घर अवस्था मा बाल बलियो लोक उपचार, kefir एक लामो समय को लागि प्रयोग गरिन्छ। डेयरी उत्पादन मास्क रूपमा कपाल लागू। अन्य घटक थप नगरी शुद्ध फारम तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
कार्यहरू केही अनुक्रम पालन:
एक पानी स्नान मा दही गरम। खोपडी बाल्न छैन रूपमा तरल तापमान जस्तै हुनुपर्छ। दूध उत्पादन कम्तीमा 1 कप प्रयोग गर्नुहोस्। यसको रकम कपाल को लम्बाइ मा निर्भर गर्दछ।
न्यानो दही, सम्पूर्ण लम्बाइ कर्ल लागू, र जरा मा ध्यान मालिश।
एक तौलिया वा रुमाल - मेरो टाउको मा झोला र माथि राखे।
मास्क लगभग 20 मिनेट राख्नुपर्छ र प्राथमिकताको शैम्पू बिना, त्यसपछि आफ्नो बाल धुन। यो प्रक्रिया दोहोरिन प्रति हप्ता 1 पटक सिफारिस गरिएको छ।
र बाल विकास बलियो बनाउन अर्थ
पातलो र निर्जीव बाल कारण बल्ब कमजोर बन्नेछ। तिनीहरूले बाल पोषण। र शरीर भने गडबड र पर्याप्त छैन पोषक थियो, बाल विकास slows। सकेसम्म घरमा यो रोग विरुद्ध लड्न। पहिले वर्णन सबै विधिहरू आफ्नो बाल फिर्ता जीवनमा मदत गर्नेछ। तर, जेनेरेसन गर्न जेनेरेसन बाट पारित गरेको छ र बच अन्य सौन्दर्य व्यञ्जनहरु छन्।
को बलियो बनाउँछ र कपाल को विकास को लागि लोक उपचार:
बादाम आधारित मास्क। दूध संग मिश्रित जमीन पागल को आधा कप। मिश्रण तरल क्रीम जस्तै हुनुपर्छ। सुझाव गर्न मूल देखि उत्पादन आवश्यकता लागू हुन्छ। बाल एक तौलिया मा र्याप। मास्क शैम्पू संग बन्द धुन।
खमीर आधारित उपकरण छ। मक्खन एक गिलास एक सानो खमीर (आधा चम्मच) संग मिश्रण। परिणामस्वरूप मिश्रण 20 मिनेट Infuse गर्न आवश्यक छ। जन त्यसपछि टाउको मा लागू गरिएको छ। बाल एक झोला मा लुकेको छ। 30 मिनेट पछि, सामान्य रूपमा आफ्नो कपाल धुन।
मह र तोरी संग खमीर। खमीर को बारे मा 10 ग्राम न्यानो पानी दुई चमचा मा भंग। त्यसपछि kefir (2 चमचा) को ठूलो खन्याउन। चीनी को एक चम्मच थप्नुहोस्। 10 मिनेट पछि, तोरी र मह चम्मच को एक मिश्रण थप्नुहोस्। यो मास्क तपाईंलाई कम्तीमा एक घण्टा हिँड्नुपर्छ।
घरमा बाल लोक उपचार बलियो: समीक्षा
फेयर सेक्स लाखौं पहिले नै हाल सार्वजनिक दानको मा परीक्षण गरेको छ। सबैभन्दा सक्रिय उनीहरूको अनुभव साझेदारी गर्नुहोस्। महिला 90% परिणाम सन्तुष्ट थिए। लोक उपचार साँच्चै प्रभावकारी छन्। ठूलो प्राथमिकता सबैभन्दा सरल व्यञ्जनहरु दिइएको छ। केही आधारभूत नुस्खा गर्न आफ्नै छाँटकाँट। प्रयोग अक्सर सफल छन्। आइमाइहरु को सबै भन्दा दही मास्क र आमा को आधार मा आफ्नो प्राथमिकता दिए।
कसरी माथिल्लो ओठ मा एन्टेनाइग्यालेक्सिज छुटकारा गर्न?
स्वास्थ्य र सौन्दर्य लागि जादू उपकरण? Argan तेल!
पहिलो-ग्रेडर लागि Hairstyles - को को शुद्धता र originality
कपाल डाई "गार्निअर रंग Sense": रंग प्यालेट, समीक्षा, फोटो
कसरी घर मा मेंहदी आफ्नो कपाल डाई
May। राशिफल, यो महिना शासन - वृष
प्रोस्टेट मालिश: खुशी साथ व्यापार संयोजन कसरी
किन भोजन तल धुन सक्दैन? भोजन के पिउन?
सामाजिक कार्यहरु को संस्कृति
एक फ्रान्सेली मैनीक्योर प्रविधी Ombre कसरी बनाउन
सुन्दर calla: रोपण र हेरविचार
तपाईंको आफ्नै हात संग कोठरी मा लुगा को लागि एक स्वाद कसरी बनाउने?
बिना पासवर्ड iCloud आईफोन कसरी लिङ्क हटाउन?
Multivarka-कुकर ब्रान्ड 6051: वर्णन, निर्देशन, समीक्षा
मार्ग M5 - सुन्दर दृश्य र भयानक सडक